Togo : Mihantsy an’i Faure Gnassingbé Eyadema Ny Fiaraha-mientana “Ndeha Hovonjena i Togo” · Global Voices teny Malagasy
Togo : Mihantsy an'i Faure Gnassingbé Eyadema Ny Fiaraha-mientana “Ndeha Hovonjena i Togo”	Voadika ny 20 Jona 2012 4:53 GMT
Zarao: Nivadika ho fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana ny diabe iray am-pilaminana nataon'ny fiaraha-mientana “Ndeha hovonjena i Togo” tamin'ny 12 Jona teo. Nanodidina ny 120 ireo naratra voarakitra an-tsoratra nandritra ireo fifandonana ny 12 sy 13 Jona. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny fitakian'ireo nanao fihetsiketsehana ny fampiharana ny zava-boalazan'ny Kaomisionam-pirenena momba ny Zon'Olombelona mikasika ny fampijaliana sy ny fanavaozana ifotony ny Lalampanorenana. Ankehitriny i Togo dia anaty tetezamita politika taorian'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny 2005 nolavin'ny betsaka ka nahatonga ho eo amin'ny fitondrana an'i Faure Gnassingbé Eyadema, zanaky ny filoha teo aloha Gnassingbé Eyadema. Misy fihetsiketsehana iray nomanina hatao ny 18 Jona.
Ivondronanà fikambanana maro samihafa mpiaro ny zon'olombelona sy antoko politika ao anatin'ilay fiaraha-mientana “Ndeha hovonjena i Togo”. Teraka tamin'ny Alarobia 04 aprily tao Lomé ary misy fikambanana 17 izay ny 7 dia misahana fiarovana zon'olombelona avokoa ODDH. Ilay fiaraha-mientana dia teraka avy amin'ny fahitàna ny zava-misy eo amin'ny tontolo politika, toekarena ary sosialy ao Togo :
Ireo tanjona apoitran'ilay fiaraha-mientana no ambaran'i Fabbi Kouassi ao amin'ny bilaoginy, manome antsipirihany amin'ny nahaterahan'ilay vondrona. Angatahan'ilay vondrona, araka ny lazain'i Kouassi :
Noraran'ny mpitandro filaminana tamin'ny alàlan'ny herisetra ireo diabe nokarakarain'ilay Fiaraha-mientana. Combey mitantara ny vokatr'ireny fifandonana ireny :
Sary azo nandritra ireo fifandonana manaporofo ny hamafin'izany fifandonana izany [Tandremo: Sary mahery setra mety hanafintohina ] :
Ao amin'ny Twitter, ireo mafàna fo togoley dia mampiasa ny tenifototra #occupyLome mba hifampizaràna vaovao mikasika ireo fihetsiketsehana amin'ny fotoana tena itrangany.
“@Toussine: “Mitifitra entona mandatsa-dranomaso an'ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy ao an-drenivohitr'i Togo http://azstarnet.com/news/world/police-fire-tear-gas-at-protesters-in-togo-capital/article_8b6569ec-0f14-5ed0-acd7-1fc206ac483c.html //#leguede #occupylome “
@Philoticus: #Togo: mila atosika hivoaka any ireo mpanao kely tsy mba mamindro, eto ary androany http://bit.ly/MjPdpJ #TGInfo #Togo #OccupyLome
@Philoticus : #TOGO: Voasambotra sy voasintontsintona i M. Célestin Agbogan – Mihetsika ny #FIDH http://bit.ly/MjPWqS #TGInfo #OccupyLome
Fahalalahàna mitenyFanoheranaFifidiananaHafanàm-po an-tseraseraMediam-bahoakaPolitikaVaovao MafanaZon'olombelona
Tweet Tantara Malaza Indrindra Manerantany 22 ora izayAmerika LatinaFotoana izao Hampitsaharana Ny Didimpoitram-behivavy Ao Amin'ny Firenena Tokana Ao Amerikana Latina Mbola Ahitana izany